निर्मलाको सँगै 'सोनाली' को लागि पनि आवाज उठनुपर्छ !
दुश्कर्म गरियो र त्यसपछि हत्या गरी निर्वस्त्र गरी खेतमा फालियो । यसको लागि एक आवाज पनि उठेन किन ?
प्रकाशित मिति : ३० भदौ, २०७५ | तराई - मधेस, १२:२८:०० बजे
अहिले निर्मला काण्ड देशभरिमै चर्चाको विषय बनेको छ । ठुल ठुला भिआइपीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सँलग्नताले निर्मला काण्ड झन पेचिलो बनेको अवस्था छ ।
कञ्चनपुरकी १३ वर्षिय बालिका निर्मला पन्तलाई बलात्कार गरी हत्या गरेर उखुँ बारीमा फालेको थियो । त्यो प्रकरणमा प्रहरीको कामकारवाहीमै खोट देखिएपछि आन्दोलन समेत उग्र भएर मानवीय क्षति समेत हुन पुग्यो ।
निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरेर फाल्दा जो सुकैको मनमा उग्र आक्रोस स्वभाविक हो । निर्मलासँग न्याय हुनुपर्छ भनेर आम नागरिक सडकमा ओर्लेपछि प्रहरीले अन्धाधुन गोली पनि नचालएको होइनन् । घटनाको अनुसन्धानमा आरोपित वा थोरै नाकारात्मक सँलग्नता देखिएपछि प्रहरीका वरिष्ठ पदाधिकारीलाई पनि निलम्बको लागि माग गरियो । आन्दोलन झन चर्कियो र देशभरिबाटै निर्मलाको न्यायको लागि आवाज बुलन्द हुन पुगेको छ ।
तर, महोत्तरीमा ९ महिने शिशुसँग दुश्कर्म पश्चात हत्या गरी फालियो, त्यो घटनाको बारेमा किन देश सुतेको छ ? निर्मला जस्तै कैयौँ बालिका नरपिसाचको मुखमा पर्ने गरेको घटना बाहिरिँदै आएको छ । केही महिना अघि मात्र धनुषाको शहिदनगर नगरपालिकामा एक दलित बालिकालाई सामुहिक बलात्कार गरी भिडियो समेत बनाएर कसैलाई भनेपछि ज्यान मार्ने धम्की समेत दिए, तर कसैले सुनेन । बलात्कारी अझै फरार छ र प्रहरी कानमा तेल हालेर सुतेकै हो ।
त्यसरी नै गत भदौ १० गते ९ महोत्तरी औरही नगरपालिका वडा नं. १ की ९ महिने शिशु सोनाली चौधरीलाई अपहरण गरियो । दुश्कर्म गरियो र त्यसपछि हत्या गरी निर्वस्त्र गरी खेतमा फालियो । यसको लागि एक आवाज पनि उठेन किन ? कहाँ गए ती मानवअधिकार कर्मी जो की निर्मला प्रकरणमा त्यतिको चासो देखाएका छन्, कहाँ गइन ती महिला अधिकारकर्मी र बलात्कारीलाई फाँसी दे भनेर चर्को नारा लगाउने अगुवा आवाजधारीहरु ? के सोनालीले पीडा भोगीनन की उनको परिवार नै पत्थरको ? निर्मलासँग न्याय हुनुपर्छ र यसको लागि चौतर्फी दबाब र आवाज अति आवश्यक छ, यस्तै, ती अबोध शिशुको लागि पनि आवाज उठनु जरुरी छ की छैन ? सोनाली चौधरी गौन किन ?
यस घटना सम्बन्धी समाचारहरु
1. महोत्तरीको औरहीबाट ९ महिने बालिका अपहरण !
2. अपरहणमा परेकी ९ महिने बालिका खोज्न निस्कीयो महोत्तरीका व्यापारीहरुको जमात !
3. अपहरण अपडेट : महोत्तरीबाट अपहरित ९ महिने बालिकाको शव खेतमा भेटियो !
4. महोत्तरीमा ९ महिने शिशुको बलात्कारपछि हत्या !!!
5. ९ महिने शिशुको अपरहण र हत्यापछि न्याय माग्दै औरहीबासी
6. ९ महिने शिशु मृतक सोनालीको आत्माको चिरशान्तीको कामना गर्दै औरहीबजारमा दिप प्रजवल
7. ९ महिने बालिका हत्याको विरोधमा आज दिनभरि बजार र बाटो बन्द गर्ने
8. ९ महिने शिशु सोनाली हत्या विरोधमा जल्न थाल्यो महोत्तरीको औरही बजार !
9. ९ महिने वालिका हत्या काण्ड : अझै समातिएन अपराधी, जनमानसमा आक्रोस !
10. ९ महिने वालिका हत्या विरोधमा गौशाला बन्द
11. ९ महिने बालिकासँग दुश्कर्म गरी हत्या गर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्यो , गाउँबाट फरार !
12. महोत्तरीमा ९ महिने बालिकासँग बलात्कार गरी हत्या गरेपछि शोकमा परिवार
13. ९ महिने वालिका सोनालीको हत्या बारे बुझ्न राजपा अध्यक्ष भण्डारी पुगे वालिकाको घरमा
14. ९ महिने शिशु 'सोनाली' कहिले न्याय पाउने ?